Abantu abaningi ungameli ekudleni kwakho kwansuku zonke ngaphandle ukusetshenziswa imayonnaise. Banezela kuba ngokuphelele zonke izitsha, nalawo azihambelani ke: isobho, isobho, i-hodgepodge. Futhi bambalwa abantu abacabanga kunokuba esikhundleni imayonnaise. Lokho amanoni efanayo okumnandi, kodwa kancane? Kodwa ngaphambi sithola ukwazi izimpendulo zale mibuzo, ake sifunde okwengeziwe ngalo mkhiqizo.
kakhulu Igama sauce livela French «moyeu» - isikhuphasha. Enye inguqulo lisitshela ukuthi iye ogama lakhe behlonipha inhloko-dolobha esiqhingini Menorca eSpain emzini Mahon. Ngemva umuzi uMbusi uRichelieu ngo-1757 abendawo babekwazi ukuthola elilinganiselwe ukudla, futhi abapheki baphoqeleka ukuba apheke amaqanda namafutha omnqumo. Omunye abapheki ngesiswebhu lezi izithako, izinongo namakhambi elimnandi kwaba sauce okumnandi, okwakubizwa ngokuthi i imayonnaise. Kulesi siqhingi, imayonnaise basangibiza sauce maonskim noma salsa mahonesa.
Kusese okungenani ezimbili izinguqulo ukuvela sauce. Omunye wabo izimangalo kufanele kubhekwe lapho kwazalelwa khona-Mediterranean, okuyilona elisebenzayo futhi iqanda ethandwa namafutha omnqumo. Kanti omunye sithambekele kulokhu kucabanga ukuthi prototype ye imayonnaise usuthandwa emazweni amaningi sauce ali-Oli, okubandakanya garlic, vukuza amafutha omnqumo. Ekuqaleni, lo imayonnaise kwaba uju, yinkimbinkimbi, okwakubonisa kuphela ukhomba ngophakathi. Kodwa ekugcineni wafika izingange zezindlu zayo zamakhosi kanye nezindlu abacebile lizimelele ku ekudleni kwabantu abavamile, okuyinto kuze kube yilolu suku zithandwa kakhulu.
I mayo, abanye besifazane ukupheka ekhaya bebodwa, akusiyo efanelekayo isitoreji eside.
Ukuqinisekisa izidingo labantu futhi ugijime sauce on ukudayiswa, ke yasungulwa okuthiwa imayonnaise ezimbonini. Isikhala post-Soviet, it is yizigaba ngokuvumelana GOST. Emit a okunama-kilojoule amaningi, okunama-kilojoule amancane futhi srednekaloriyny. I "amanoni" imayonnaise iqukethe amafutha 55% kancane futhi 35% amanzi. Ngo srednekaloriynom - 40-55% amanoni 35-50% amanzi. I yemifino imayonnaise fat 40%, kanti amanzi - ezingaphezu kuka-50%. Kuyini ubuchwepheshe kulungiselelwa imayonnaise? Ngenxa ngokwako lokhu sauce - hhayi ukuthi abanye, njengoba i emulsion "uwoyela emanzini", isithako zalo eziyinhloko kwaba Iqanda lecithin, okusho isikhuphasha. Manje, lokhu iwumkhiqizo wemvelo ngelinye eshibhile soy lecithin nezinye emulsifiers. Aint it iqiniso akuzwakali mnandi kakhulu? Ngakho-ke kungcono ukwazi kuka ungakwazi ukushintsha imayonnaise izitsha ukuthi uzilungiselele nsuku zonke.
Isibaluli oyinhloko zonke ngamaholide amasaladi ezifana Olivier herring ngaphansi ijazi noboya. Yebo, kwabaningi kuba a esihlwabusayo symbolical, kodwa ambalwa khumbula ukuthi ukudla ekuqaleni okunamafutha Akubalulekile uhlanganise amanoni kanye sauce efanayo. Ukuze ugcine esiswini yethu futhi isibindi, ake ufunde indlela esikhundleni imayonnaise e isaladi? Kukhona Okungenani kunezinto ezintathu ongazisho ukuphi.
Sauce kusuka iyogathi zemvelo. Gaya blender elungisiwe ushizi 5% fat yogurt, engeza amakhambi nesweli.
Beat in a blender isipuni lwesinaphi spoon ngamafutha yemifino, uviniga, kalamula, engeza usawoti kanye pepper ukunambitha.
Lemon sauce. Kalamula, amafutha yemifino, isipuni esigcwele cream kakhulu ushukela Beat in a blender, engeza emhlabathini pepper, amakhambi fresh and usawoti.
Kodwa yini okufanele esikhundleni imayonnaise e isaladi imifino, ungacabangi. Zizwe ukhululekile gcwalisa ngamafutha omnqumo, usoso wesoya noma ijusi lemon. Kuyinto imayonnaise enempilo kakhulu futhi tastier.
Omunye umkhiqizo kubonakala zingabhekani angaba khona ngaphandle isoso kanye imayonnaise - kuyinto pizza wonke umuntu eyintandokazi. Kodwa khumbula: kule pizza kusuka Italy akuyona igremu elilodwa lo mkhiqizo!
Kuyinto kuphela ukudla okusheshayo baking yethu elimnandi isiqeshana ngesandla esivulekile enongiwe amafutha sauce ukuthi iphazamisa ngokuphelele yonke ukunambitheka we ukugcwaliswa. Kodwa ngaphambi kokuba esikhundleni imayonnaise kwezinye nososo pizza, ungazami ucasuka: ngaphandle kwalo, empeleni iba okumnandi ngaphezulu! Ake ucabange, lokho ngokuvamile ibekwe esitsheni. Ukuze inhlama ukugcwaliswa kwaba namanzi kakhudlwana. Kodwa nalesi sici ngempela ukuba babhekane nakho, kanye neminye imikhiqizo. Ngokwesibonelo, ungakwazi gcoba inhlama ne utamatisi sauce noma nje babeka ekuqaleni oqoshiwe utamatisi tincetu. Noma kunjalo, yiphani ukugxusha namanzi, ummbila okusemathinini futhi semali ushizi vukuza. Zitshele ufafaza nabo pizza imizuzu emihlanu kuze kwenziwe futhi sesiqiniseka ukuthi ngokuzayo ungeke ube umbuzo "yini okufanele esikhundleni imayonnaise", uzokwazi ukuthi ngaphandle bayobhaka tastier okuningi.
izimfihlo Umbhangqwana ngaphezulu pizza
Kukhona nososo okungenani ezimbili ezenza pizza namanzi, kodwa hhayi okunamafutha.
Utamatisi sauce. utamatisi Fresh ukulungiselela amazambane ecubuziwe. Ukuze wenze lokhu badinga ukuqeda ikhasi usebenzisa amanzi abilayo futhi gaya in a blender. Engeza amafutha omnqumo noma amafutha sunflower, izinongo, garlic, amakhambi kanye ngamathumba on ukushisa low imizuzu 20. Ngemva ukuqina sauce kuphole futhi gcoba kubo pizza.
Walnut sauce. Walnuts ochotshoziwe blender noma ikhofi grinder, uhlanganise ukhilimu omuncu, izinongo kanye ukushisa. Alulaze ufulawa ngamanzi afudumele yaphinde yaphathwa ingxube-ukhilimu nut, ekufezeni ukuvumelana oyifunayo. Lokhu kuyokunika pizza sauce yakho yiphunga.
Uzizamele imikhiqizo ehlukene, futhi kungenzeka ukuthi ngeke usungula iresiphi akho yokuqala pizza sauce.
I esikhundleni imayonnaise lapho bayobhaka
Ngezinye izikhathi zibizwa ngokuthi umbulali imayonnaise ukunambitheka. Ngempela, kufanele wengeze kunoma isidlo - futhi zonke ukunambitheka kwakhe kwangempela irretrievably elahlekile. Kuyefana nasendleleni ukudla enzelwe ukuba ephekwe eziko. Ngokwesibonelo, yini iresiphi for the inyama owaziwa French? Ushizi, imayonnaise, anyanisi ... Yini esikhundleni imayonnaise kulesi simo? Usizo kuza bechamel sauce, okuyinto ibhalwe ngesisekelo ukhilimu omuncu ne bhotela ne ukwengeza imikhiqizo efana ufulawa, ubisi, kalamula kanye nezinongo. Inyama okuphekiwe ngale sauce kuyoba tastier nokuningi ewusizo, ngoba ongawamukeli ingxenye eyengeziwe fat.
Muva nje-ke sekuwumkhuba marinate inyama on skewers e imayonnaise. Kungani wenza lokhu? Kukholakala ukuthi wenza ithenda inyama. Nokho, ukuthambisa imicu Udinga imvelo esidi, bese Ngamafuphi nje - uviniga. Ngakho, imayonnaise - akusiwona ncamashi okudingayo kule izoso. Kukhona inala ongakhetha kulokho sauce Ungashintshanisa imayonnaise, eziningi marinades ezahlukene, ngakho musa ukusheshe makudle lokhu nososo amafutha. Beautiful ithuba skewers kulolo ketshezi e inqwaba amakhambi oqoshiwe kanye izinongo nge lamanzi esiphethu kancane nge uviniga. Enye sauce - kuyinto iwayini elula abomvu noma amhlophe, okungcono ezomile noma ephuma kabili eyomile. Tartaric acid uyokwenza ithenda inyama kanye amagilebhisi lona ukunambitheka okungavamile kanti iphunga.
Eyokuqala ukugwema ukusetshenziswa imayonnaise kulabo obakhathalelayo ubuhle sibalo. Kulabo uhlushwa isisindo okweqile, lo mkhiqizo kufanele bavinjelwe kuqala ohlwini. Yini esikhundleni imayonnaise ekudleni? salads Vegetable ezikahle ukugcwalisa ngamafutha yemifino, ezifana omnqumo. Futhi ukugcwaliswa ezinhle esekelwe uviniga balsamic kanye kalamula. Imayonnaise, kanye fat ukhilimu omuncu, ifakwe ngempumelelo esikhundleni yogurt ezingenashukela, okuyinto unga ukunambitheka kanye izinongo kanye namakhambi. Kodwa lapho bayobhaka kungcono ukugwema ehlukahlukene nososo, uma ukudla. Vele ubeke inyama noma inhlanzi in ucwecwe, Ukukhemezela ne kalamula basihlikihle spice, bese usebenzisa kangcono amakhambi fresh ubhake: ngakho umkhiqizo uyosindisa hhayi kuphela ukunambitheka yakho, kodwa futhi izakhiwo ewusizo. Uma ungakaboni ukucabanga ukuphila kwami konke ngaphandle imayonnaise, ukupheka ngokwakho. Indlela ikhaya kuhlanganisa amafutha, inkukhu amaqanda izikhupha, lwesinaphi kanye nenombolo ye izithako, izinga kanye nenani okuyinto ungalungisa ngokwakho.
Ukuphothula: kanjani ukukhetha?
Manje ngoba sewuyazi ukuthi yini okunye esikhundleni imayonnaise ezihlukahlukene ukudla kanye izitsha.
Noma kunjalo, uma namanje azilungile ukulishiya ngokuphelele ke, zama ukulandela izimiso ezimbalwa ezilula lapho ukhetha ke esitolo. Ngakho ngaso sonke isikhathi sinake lokucuketfwe fat, zikhetha mafutha, hlola yobunzima iphasela, uthole kwilebula umbhalo oqoshiwe ukuthi umkhiqizo ihambisana namazinga isimo. Ukutadisha yokwakheka ngifuna ngokucophelela kuye okufakiwe E951. Ukuthola embizeni eceleni ohlangothini. The best kuyinto imayonnaise ngamafutha omnqumo, equkethe yasiza nempilo acid. Futhi, usebenzisa imayonnaise ekudleni, khumbula ukulinganisela: kuyinto nje ambalwa amathisipuni imikhiqizo uwoyela ubanikeze ukunambitheka efanayo oyifunayo.
Amaprotheni: lokho kunikeza lezi zinto?
Qamba izithelo nemifino. Ukufunda IsiNgisi
Fructose - kuyini? fructose kanjani usizo?
Ubani ngibe lapho sengikhulile? Inkinga yokukhetha mkhakha: ubufakazi ezincwadini
Indlela yokwenza isixha amasokisi?